Mofomamy paiso vaovao - Recipe Thermomix | ThermoRecipes
tsindrin-tsakafo225 minitraOlona 8260 kaloria
Ity mofomamy ity dia tokony hohanina amin'ny fotoana rehetra amin'ny taona, nefa milay ihany koa ny misotro amin'ny fahavaratra. Mofomamy izay tsy manana voankazo sy fromazy matsiro.
Mba hanaovana azy dia nanao fototra biskoitra crunchy izahay ary nametraka famenoana fromazy sy crème. Mba hanaparitahana azy dia nasiana sosona sakamalao paiso miaraka amina jelly matsiro misy tsiro voankazo roa.
Azonao atao ny mamita an'ity tsindrin-tsakafo ity ao anaty vata fampangatsiahana mba hametrahana tsara sy ho lasa mangatsiaka kokoa sy mangatsiaka kokoa. Azonao antoka fa ho tianao ny mofomamy sy ny fromazy miaraka amin'ireo voankazo matsiro miaraka aminy.
1 Mofomamy paiso vaovao
Mofomamy matsiro sy mamy vita amin'ny crème sy fromazy faran'izay tsara ary sosona biskoitra mangatsiaka. Handravaka azy amin'ny sosona paiso hafa amin'ny sirrup isika izay hahatonga azy io ho salama kokoa ary voajanahary kokoa.
Fotoana fiomanana: 3h 30M
Fotoana manontolo: 3h 45M
Bisikileta fandevonan-kanina 135 g
Dibera 85 g, atsonika
400 g ny karazana fromazy fanosotra ao Philadelphia
Krim-kapoka 400 ml
5-6 antsasaky ny paiso amavo
175 ml ny syrup an'ny paiso
Jelly frezy 2 sotro fihinana
Jelly voasarimakirana 2 sotro fihinanana
Nokapohinay ny vera mangatsiaka tao anaty vera Thermomix niaraka tamin'ny lolo. Ho an'izany dia ampio ny crème 500 ml miaraka amin'ny siramamy 100 g ary ampandehananay azy manodidina 45 segondra amin'ny hafainganam-pandeha 3,5. Ny fotoana fikapohana dia manondro satria ny crème dia mety mila fotoana bebe kokoa na kely. Amin'ity tranga ity, raha mila fotoana bebe kokoa ianao dia hokapohinay mandritra ny segondra vitsy monja nefa tsy hihozongozona ny fikororohana anao. Esorinay avy eo amin'ny vera ilay crème ary apetraka.
Ao anatin'io vera io ihany nefa tsy misy fanadiovana ary miaraka amin'ny lolo, ampio ny fromazy fanosotra 450 g ary kapohy izany 10 segondra amin'ny hafainganam-pandeha 2,5. Arotsahy ilay crème whipped, afangaro kely amin'ny sotro ary afangaro indray 8 segondra amin'ny hafainganam-pandeha 2. Esorinay avy ao anaty vera ilay crème dia ataontsika ao anaty vilia iray ary apetraka ao anaty vata fampangatsiahana.
Manadio ny vera izahay ary manampy ny cookies 135 g ary manorotoro azy ireo mandritra izany 10 segondra amin'ny hafainganam-pandeha 7. Ampiarahinay ny dibera miempo (azonay atsofoka amin'ny hery ambany ao anaty microwave) ary afangaro 5 segondra amin'ny hafainganam-pandeha 6.
Manamboatra lapoaly mofomamy misy savaivo 18cm eo ho eo izahay, mihidy ary azo esorina amin'ny lasitra. Raha ny amiko dia nametraka tapa-taratasy fasiana menaka manitra teo amin'ny fotony aho mba hahafahako mamaha ny mofomamy mora kokoa. Izahay dia manampy ny biscuit torotoro ary mamorona sosona tena malefaka sy malefaka. Afaka avela toy izany izy na apetraka ao anaty lafaoro amin'ny 180 ° mandritra ny 8 minitra.
Navoakanay ny vilany ary avelao hampangatsiaka. Hanampy ny fromazy fanosotra izahay ary hametraka azy ao anaty vata fampangatsiahana mandritra ny adiny iray mba hivaingana. Rehefa manana izany saika vonona isika dia hanomana ny fandrakofana.
Ao anaty veranay madio dia ampiantsika ny syrup 175 ml, ny rano 75 ml, ny gelatin-boasobia roa sotro fihinana ary ny gelatra voasarimakirana roa. Hafanainay izany amin'ny alàlan'ny fandaharana 2 minitra amin'ny 100 ° amin'ny hafainganana 1. Alohan'ny hametrahana azy amin'ny mofomamy dia avelantsika hangatsiaka izy.
Izahay dia nanapaka ny paiso ho ampahany kely ary namelatra azy nanarona ny mofomamy. Izahay dia manampy ny gelatin mangatsiaka ary averinay ao anaty vata fampangatsiahana mandra-pahatongan'ny filentehany. Mba hahafahana manompo azy dia azonao atao ny mamoaka azy amin'ny adiresy adiny adiny iray mialoha sy manompo azy.
Mitadiava fomba fahandro hafa momba ny: General, Postres
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Thermorecetas » General » Mofomamy paiso vaovao